Ma Dan Baan Ka Leeyahay Riyaa Danabku Leynaayo (Abdi-Shotaly).
Tuesday October 12, 2021 - 12:20:56 in Articles by Hadhwanaag News
Aduunyadan Rubuc hadhay, inteeddii badnayd la rogay, rug-teeddii bahalku degay. rays-keeddii wadda engegay, fool-xumo ay raysatee wakhtigu uu raarayee, dadkii wadda raad gateen, ratiga loo qalay sunta ah ( waa xaaraane), riyuhu ay maamulaan, Xaqii hay raadin yidhi, Run baa car i sheeg i tidhi, samaa yidhi hay rokayn, dantii way reeban tahay, belaa tithi ii riyaaq, khayr baa laga roorayaa, shar baa risiqii u galay, markaan raacdee is idhi, talaa tidhi hay rog-rogin. Been baa tidhi ani i Raac,Tuug baa yidhi ila rafiiq, Xaaraan baa tidhi ani i ruug, Xalaal baa tidhi i reeb. Cannaan baa la riixayaa, wanaag wuu riiq-mayoo, Kal-gacal baa ruugag jabay, rishwaa tihdi hayga tegin, cidlaan ku rafaad-sanoo, wa taas i rifeen dugaag, roobkii da'a kama caboo, waxaan ruubtaa haraad, ilkuu wax ma raabiyaan, waxaan ruugaa lafaha, markaan macaluul ribaday, naftii ila roor i tihdi, sidaas reer kuma dhaqmee ( Waa somalilande). Hadaba muwaadin, haddii uu kuu dhacay ama aad fahantay, micnaha ay inoo qeexayaan arimha sare ku yaalaa, ma is waydiisay waxa sababay, mise weli maad dhaadin? Ma wax laga murmaa baa in ay xajooyin-kaasi ay la bilaabmeen " Raggii ma adigaa ka hadhay iyo ka uu ku adeegto ee Geenyo Shaaximan" Bal adigu wax ku sheeg, qarana waad ku af gobaad-sataa, ilayn waad ku xoogsa-taaye,, qabiila waad ku mahad naqdaa ah anakaa kursiga ku fadhina, waxad soo kordhi-sayna, waa waxa aan ku fasilay kor.
Waa aduun ay xumaani dhidi-badda u saartay, oo wixii si loo yaqaanay beri hore, imika xaga kale laga rogay, oo qulaan-qulshaha laga gawracay, laga dhidiiqiyey dhaqankii wacnaa, hidihii suubanaa, iimaankii, diintii iyo wixii illah ina faray, misana ay afka boodh soo wadda marsanayso, munaafaqad, khiyaali la isugu khaakhaa-yiraayo, si laguugu khaldo, oo laguu dhaxal wareejiyo, wax aan jirin oo la isku maaweeliyo, ay ka mid tahay dafiraad aan geed-na loogu soo gabannini, hadana indhaha la isku caday-naayo si loo damba-baso tuugani-madda aan loo aabo yeelayn, reer hebela daaha dabadiisa lagaga maamulaayo. weliba calaa-haakadda ay is yeel-yeel awggii, sidi-muldhukh isaga wadda dhigayso iyo nebiyo soo daahiray, wadaadkii iska walamsa-naayo, kii cumaamadda reer u sitay, hunguri u ordaayo iyo xagaad saaka wax ka soo heshaa, oo waxii laga xishoon jirey oo dhan la fasaxay, hadeer-na si cadaan ah loogu ceeshaayo, khaladkii sax noqday, kii qaban lahaana, uu leeyahay maxaa kaa galay, mar haddii ay beesheena tahay, cidda sidaasi u faa'iido tahay. wixii rogmayaa yeel-kood. mar hadaynu inaku dhergayno, ma dan baan ka leenahay riyaha danabku laynaayo.
Waxan ku soo af-meeray qoraalkan, hadaad jeceshahay Somaliland wixii la odhan jirey ( Intii ka horeysay ee aanu Siilaanyo xanuunsan Ilaah caafimaad ha siiyo'e), ee aanu ku fasaxin ayaxan uu ku soo hurgufay wadankii, ee xaaluf daaqa ah, wax kale iska daayo dhirtii xididadda u saaray, siddii geedka garan-waaga ah ee inagu cusub, aan hore inoo soo marin noocani. waa ina kaas maanta hayna cidhib-teeddii, ee la inaga xukumo Somaliya, wixii aynu u soo basbeelay cirka laga eegay, ee ay sii gashay maah-maah-ddii ahayd " Kud ka guur oo qanjo u guur", Waa taas ruugaga dhigatay, ee cagaha cirka u taahtay siddii neef la gawracay. Waxan kaga baxay maqaalkan, Ilaah ha u naxariisto Axmed Ismaaciil Diiriye ( Qaasim) Baa wuxu yidhi " Ab-tirsoomno wiilkii yaqaan, aayo-tiin malahe, Ma afurin agoonkii wadiyo, kii u shaw sidaye, olol-keedu waa ii baxaa, oogta waaberiye, afar-teedda naas baan lahaa, ubadka deeq-siiye, waa taas ilama loogu xidhay, geed adaahi-yahe" Geedka la yidhaaho " Adaahidu" dhib mooyee dheef lagama helo, oo waa bilaa faa'iido, sidaas oo kale, maamulka ka soo jeedda " Xaafad-tooyadu" Mid khayr laga dheefaayo maaha khasaare iyo dhib mooyaane, Waxa taagan maansaddii Tima-cade (Ihun) ee uu yidhi " Duulkii inkaar qaba, jina adaasadaw tuma'e". Allay-lehe Jaahil ma idin hor booday.
* N.B Been Baa Tidhi Ila Rafiiq!